केहि महिना पहिले श्रीमती गुमाउनु भएका मिलानसार बराल दाइलाई आज फेरि डाक्टर छोरी गुमाउनु भयो ! - Tanahu Post
केहि महिना पहिले श्रीमती गुमाउनु भएका मिलानसार बराल दाइलाई आज फेरि डाक्टर छोरी गुमाउनु भयो !
केहि महिना पहिले श्रीमती गुमाउनु भएका मिलानसार बराल दाइलाई आज फेरि डाक्टर छोरी गुमाउनु पर्दा झन बढी पीडा थपिएको छ सबैले रिप अनि शेयर गर्दिनुहोला
हार्दिक श्रद्धाञ्जलि : सिन्धुली निवासी आदरणीय दाजु राजन बरालको छोरी चारुको आज प्लेन दुर्घटनामा परी असामयिक निधन भएको खबरले दुखी बनाएको छ । केहि महिना पहिले श्रीमती गुमाउनु भएका मिलानसार बराल दाइलाई आज फेरि डाक्टर छोरी गुमाउनु पर्दा झन बढी पीडा थपिएको छ । शोकको यो घडीमा इस्वरले पीडित परिबारमा धैर्यधारणा गर्ने शक्ति दिउन भनी भाबपुर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु ।
बंगला बिमान दुर्घटना अघि पाईलटले यस्तो भनेका रहेछन् । सुनेर तपाईको होसै उड्नेछ । भिडियो सहित काठमाडौं, २८ फागुन । त्रिभुवन विमानस्थलमा सोमबार भएको बंगलादेशी विमान दुर्घटनामा एएटै कलेजमा पढ्ने १३ सहित १४ विद्यार्थी परेका छन् । बंगलादेशमा मेडिकल अध्ययन गरीरहेका १४ जना विद्यार्थीहरु विमान दुर्घटनामा परेका हुन् । जसमध्ये जलालावाद रागिव रविया मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनरत १३ विद्यार्थी छन्।
बंगलादेशस्थित नेप्लिज मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष नविन यादवले उक्त मेडिकल कलेजका १३ विद्यार्थी दुर्घटनामा परेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार एक जना विद्यार्थी भने कुमुदिनी वुमन्स मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत हुन्। दुर्घटनामा परेकामध्ये प्रिन्सी धामी, चारु बराल र समिरा बज्राचार्यको काठमाडौं मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अन्यको अवस्था प्राप्त हुन सकेको छैन।
रुपन्देहीका न्यायाधिवक्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : ८० हजार घुस मागेको आरोप
मनकारी दानी सांसद जसले दिए ५ करोडकाे जग्गा
प्रधानमन्त्री ओली-माधब कुमार नेपाल जुध्दा दाहाल निर्णायक!!!
Prevस्थलगत रिपोर्ट : भोलेबाबाको ताकमा युवतीहरू – कैलालीबाट लाइभ !
Nextहाम्रा पाइलटलाई मिसगाइड गरेकाले दुर्घटना भयो’
म त भए खरानी !चर्चित गायक पुस्कल शर्मा र सारिकाको बिहे हुदै गर्दा पुस्कलको भयो यस्तो दुर्गती, भिडियोमा हेर्नुहोस (47)